गोर्खा कप विगतदेखि वर्तमानसम्म | Everest Times UK
गोर्खा कप तमु धीं युकेले विगत १७ बर्ष देखि निरन्तर आयोजना गर्दै आएको फुटबल टुर्नामेन्ट हो । यो संभवत नेपाली डायस्पोराकै सबैभन्दा आर्कषक र लोकपृय कार्यक्रम हो । खेलकुद शारीरिक दन्दुरुस्त राख्ने र आपासमा भाइचारा र सामाजिक सद्भाव राख्ने बिशेष माध्यम हो भन्ने मुलमन्त्रबाट प्रेरित भएर तमु धिं युकेको संस्थापक अध्यक्ष मिन प्रसाद गुरुङ, मिन बहादुर गुरुङ (साईला) र रमेश भट्टचनको संयुक्त प्रयासबाट सन् १९९६ मा पहिलो पटक ‘गोर्खा कप’ को थालनी भएको हो (मिन गुरुङ) । तर, यो निरन्तर संचालन भने हुन सकेन । सन् २००३ बाट तमु धिं युकेले यसलाई पुनः संचालनमा ल्याएका हुन् । जुन आज परन्त निरन्तर संचालन भैरहेको छ ।
गोर्खा आफैमा गौरव र प्रतिष्ठाको शब्द हो । यो शब्दको उच्चरण गर्ने वित्तिक्कै छाती चौडा भएर आउँछ । मन मस्तिष्क प्रफुल्ति भएर आदार र सम्मान भाव प्रकट हुन्छ । बहादुरी र इमान्दारीको सच्चा निष्ठा छछल्किएर आउँछ । त्यसैले नेपालको सम्बन्धमा थप परिचय दिंदा हामी सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश र बीर गोर्खाको देश भन्ने गर्छौं । गोर्खा वीर बहादुर, इमान्दार, कुशल योद्धा र झुजारु लडाकुको पर्याय शब्द भएको छ । जसका लागि दुईटा भनाई जस्ताको त्यस्तै राख्न चाहान्छु ।
१) यदि कुनै मान्छेले उ मर्न डराउदैन भनेर भन्छ भने त्यो मान्छेले ठाँटेको हुनुपर्दछ कि त गोर्खा हुनु पर्दछ । –जनेरल मनिक शा
2) The Gurkha Soldier“ Bravest of the BraveMost generous of the GenerousNever had CountryMore faith full friends” Thank you-Pro Ralph Tunner MC
यो पछिल्लो भनाई बेलायतको रक्षा मन्त्रालयको अगाडि ठड्याएको गोर्खा सैनिकको मूर्तिमा लेखिएको वाक्य हो । जहाँ हजारौें मानिसको आँखामा यो भनाई ठोकिरहन्छ । गोर्खाको प्रचारप्रसार भैरहन्छ । त्यस्तै नालापानीको युद्धमा अंग्रेजहरुले आफ्ना दुश्मन गोर्खालीहरुको सम्मानमा निर्माण गरिएको खलंङ्गा स्मारकमा पनि गोर्खाहरुको वीर गाथा कुदिएको छ । युद्ध भूमिमा व्यक्तिगत सैन्य शिप र कौशल क्षमताले अद्धितिय सौर्य पराक्रम नेतृत्व प्रदान गर्न सके वापत दिइने भिक्टोरिया क्रस (भिसी) संयुक्त अधिराज्य बेलायतको सबैभन्दा गरिमामय युद्ध उपहार हो । जुन तेह्र जना गोर्खाहरुले पाईसकेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ गोर्खा भनेको लडाईको मैदानमा रण कौशल र सिप प्रर्दशन गरेर शत्रुलाई हराउन सक्ने बहादुर हो । त्यसैले आज संसारमा गोर्खा शब्दलाई जोडेर थुप्रै संघसंस्थाहरुले आफ्नो नाम राखेका छन् । सबैले चिन्ने, बुझ्ने र जन जिव्रोमा झुण्डिने ब्रान्डेड नाम जोड्दा ग्राहक आकर्षित हुन्छ, व्यापार व्यवसाय फस्टिन्छ भन्ने बुझाईले पनि आपूmले संचालन गर्ने व्यवसायको नाममा गोर्खा शब्द राख्ने चलन बढ्दो छ । Gurkha Mortgage, Gurkha Security Services, Gurkha Grocery, Cafe Gurkha, Gurkha Jewellery, Gurkha School of Motoring आदि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यहि पृष्ठभूमिमा रहेर तमु धिं युकेले गोर्खा कप नामकरण गरेर एक दिवसिय फुटबल टुर्नामेन्ट विगत १७ बर्ष देखि निरन्तर संचालन गरिरहेको छ । यो तमु धिं युकेको वीर गोर्खाहरुप्रतिको श्रद्धा र सम्मान हो । वीर योद्धाहरुको बीर गाथा अभिव्यक्त गर्ने माध्याम हो । पूर्खाहरुलाई सम्झना नयाँ पिढीलाई बिसाउने उदाहरण हो । गोर्खा शब्द वीर योद्धाको नाम भनेर संसारभर चिनिए झै गोर्खा कप फुटबल टुर्नामेन्ट पनि बेलायतको नेपाली समुदायमा मात्रै नभएर संसारभरीको नेपाली समुदायमा स्थापित भएको छ । यो कप बेलायतको स्थानीय प्रशासन रसमुर बरो काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमको पात्रोमा समावेश गरेको छ । बेलायतको नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा यहाँको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वोध गरि उनीहरुको कार्यक्रममा सुचिकृत गरेको संभवत यहि मात्र एउटा कार्यक्रम हो ।
उहिले नेपालमा गाउघरमा दशै, तिहार, ल्होछार, बैशाष पूर्णेमा नयाँ कपडा लगाउने, मिठो खाने, इष्टमित्र भेट्ने र रमाईलो गर्ने गथ्र्यों । त्यसैले लाहुर गएको लाहुरेहरु पनि छुट्टि मिलाएर त्यहि बेला घर आउँथ्यो । पारीवारिक मिलन हुन्थ्यो । महौल राम्रो हुन्थ्यो, ठिक त्यस्तै परिस्थितिको अनुभूति गोर्खा कपले दिन्छ । टाढा टाढा छरिएर बसेका आफन्त, ईष्टमित्र, साथीसंगी, लाहुरेका नम्वरी मित्रहरु भेट्ने थलो भएको छ । गोर्खा कपको दिनमा लगाउने भनेर हिन्दी सिरियलमा प्रचलित कपडा र गहानामा सजिएर आउछन् । यो कार्यक्रम मे महिनाको अन्तिम आइतबार संचालन हुन्छ । कार्यक्रम स्थल अल्डरसटको क्वीन एभिन्यू चउर हो । मेन क्याटगोरिजमा ३२ टिम र भेट्रेन क्याटगोरिजमा ८ टिम गरि जम्मा ४० टिम सहभागी हुन्छ । यस्को व्यवस्थापनको लागि तमु धिं युके एकहप्ता पूरै जुटेको हुन्छ । झण्डै १००/२०० तमुहरु गोर्खा कपको तयारीमा स्वयंसेवकको रुपमा सहभागी हुन्छन् । बेलायत त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ समयको ठूलो महत्व हुन्छ । समयलाई उचित सदुपयोग गर्न सक्यो भने प्रत्येक पल उपलब्धीमुलक हुन्छ । अर्थात् कुनै पनि समय बेलायतमा ओभर टाईम काम गरेर सदुपयोग ग¥यो भने घर परिवारमा हुने खर्चको लागि थप राहत हुन्छ । यसरी व्यस्तताको बावजुद गोर्खा कप सफल पार्न स्वंयसेवक भएर काममा खटिन्छ । कस्ले बढि समय दिन सकिन्छ, कस्ले बढि काम गर्न सक्छ, एक खालको अघोषित प्रतिस्पर्धा हुन्छ । काममा सहभागी नहुँदा कतै केहि अपराध गरे जस्तो हिनता बोध महसुस गर्छन् । सहभागी भएर काम गर्नु भनेको समाजलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेको सम्झन्छन् । गोर्खा कपको सफलता आफ्नो सफलता सम्झन्छन् । गोर्खा कप तमु धिं र तमु धिं संग आवद्ध तमुहरुको प्रतिष्ठा र इज्जत सम्झन्छन् । आमा समूह र अरु मनका धनी व्यवसायीहरु विहानै देखि चिया, सेलरोटी, तरकारी, खाजा भुजा र अन्य चिसो पिय पदार्थको व्यवस्था गर्छन् । यो पनि सबै निःशुल्क हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट खुलेर काम गर्ने, सहयोग गर्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसरि यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नु अवसरको रुपमा लिन्छन् ।
गोर्खा कप संचालन गर्ने ४०/५० हजार पाउण्ड खर्च लाग्छ । कार्यक्रम स्थलमा राखिने स्टल, पसलहरु सबै बेलायत सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हुनु पर्छ । सहभागी खेलाडी र दर्शक सबैको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनु पर्छ । गोर्खा कपमा १४/१५ हजार दर्शकहरु उपस्थित हुन्छन् । सबैको लागि दिसा पिसाव गर्ने, उचाल्न सकिने हल्का पोर्टरलु ९०/१०० ओटा र फोहोर फाल्ने स्किप ७/८ ओटा व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका लागि २०/२५ हजार पाउण्ड तमु धिंका कार्यसमिति, सल्लाहकार, आजीवन सदस्य र शुभचिन्तकहरुबाट चन्दा स्वरुप जम्मा गरिन्छ । बाहिर तमु धिं युकेले गोर्खा कप संचालन गरेर पैसा कमाउँछ भनि अनावश्यक चर्चा गर्नेहरु पनि छन् तर वास्तवमा तमु धिं युकेले आफै भित्र पैसा जम्मा गर्छन् । विना पारीश्रमिक काम गर्छन् । गोर्खा कपमा स्थापित यो परम्परा आफैमा सुन्दर र महान छ । उहरणीय र अनुकरणिय छ । अरु खर्च प्रवेश शुल्क र प्रयोजकहरुको सहयोगबाट पूरा गरिन्छ । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन स्थानिय प्रशासन संग समन्वय गरेर ४०/५० जना एसआईए सेक्युरिटी लाईन्स होल्डर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्छ । ९/१० ओटा लाईसेन्स होल्डर सुरक्षाकर्मीहरु संस्थाले भोलियन्टरको रुपमा खटाउँछ । नत्र प्रशासनले सुरक्षा चुनौतीको संवेदनशिलता देखाएर कार्यक्रम रोक्न खोज्छ । फुटबल खेललाई मर्यादित बनाउन फिफाले मान्यता दिएको रेफ्री र लायन्समेनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसको लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु पर्छ । त्यसै गरि २/३ ओटा एम्बुलेन्स पनि कार्यक्रम स्थलमा स्ट्यान्ड वाई राख्नु पर्दछ । एम्बुलेन्समा ५/६ जना प्राथमिक उपचारको दक्ष व्यक्ति खेल अवधिभर तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ । विशाल जन समूह बीच अकस्मात कसैलाई केहि हुन गएमा आकस्मिक सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नु परेको हो । यसरि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्न अनुमति मिल्छ ।
कार्यक्रम स्थलमा १४/१५ ओटा रेष्टुरेण्टको व्यवस्था हुन्छ । नेपाली मम, चाउमिन, सेकुवा, सुकुटी, भुजा, पानीपुरी, सेलरोटी सबै उपलब्ध हुन्छ । मादक पदार्थ निषेध गरिएको हुन्छ । यस अलावा विभिन्न संघ संस्थाहरु र व्यापारिक कम्पनीहरुले आफ्ना व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि स्टल, सो रुम र दोकान संचालन गर्छन् । यसलाई आफ्ना कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धनको अवसरको रुपमा लिन्छन् । गोर्खा कप बेलायतको नेपाली समुदायको युवाहरुलाई फुटबलको माध्यमबाट आपसी सद्भाव र भाईचाराको भावना जागृत गराउने हेतुले शुरु गरिएको हो । बेलायतलाई लक्षित गरि संचालनमा आएको यो कार्यक्रम अहिले बेलायत बाहिरका नेपालीहरु पनि यसमा जोडिन आएको छ । हंगकंग, बेल्जियम र हल्याण्डबाट विगत २/३ बर्ष देखि सहभागी भई रहनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । आयोजकलाई ४० टिम भन्दा बढि टिमलाई खेलमा सहभागी गराउन दबाव आईरहन्छ, तैपनि टिम संख्या बढाउने वित्तिक्कै व्यवस्थापनमा जटिलता थपिने भएकोले पहिलो दर्ता हुनेहरु सूचिको आधारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यक्रम सफलपुर्वक सम्पन्न गर्न तमु धिंले आपूmबीच कामको विभाजन गरेको हुन्छ । आफुलाई सुम्पिएको काम सबैले इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गरेको हुन्छ । कार पार्किङ्ग, कन्ट्रोल टेन्ट, सेक्युरिटी, अतिथि सत्कार, खेलाडि रेखदेख, आमा समूह सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको हुन्छ । अध्यक्ष र कार्यसमितिले सबैको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने गर्दछ । जस्ले काममा चुस्त र दुरुस्त हुने गरेको छ ।
गोर्खा कपमा शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउनु यसको प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिईन्छ । यस्को लागि यहाँको स्थानीय प्रशासनसंग निकट रहेर काम गर्नुको विकल्प छैन । मर्यादाको क्रम नमिल्दा नमिल्दै पनि यहाँको स्थानीय मेयरलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु यहि कारणले हो । बिहान कार्यक्रममा आउँदा बेलुकी कार्यक्रम समापन पश्चात फर्किदा बाटो ट्राफिक भएर अल्डरसट र फार्नवरो क्षेबको जनजिवन प्रभावित हुन्छ । प्रहरीले हेलिकप्टरको गस्ती गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्छ ।
बेलायतको नेपालीहरुको बेलायत बसाई पहिलो पुस्ता हो । त्यसैले यहाँको स्थानीय समाज र परिस्थितिसंग मिलेर नयाँ जिवन बिताउनु एउटा चुनौती छ भने आफ्ना सन्ततिलाई आप्mनो संस्कार र संस्कृतिको जानकारी गराउदै हस्तान्तरण गराउनु अर्को चुनौती रहेको छ । परोक्ष अपरोक्ष गोर्खा कपले यस कुराको संवोधन गरेको प्रतित हुन्छ, किनभने यो कार्यक्रममा केटाकेटी, युवायुवति र लौरो टेक्ने बुढाबुढी सबैको उपस्थिति हुन्छ । पशुपतिको जात्रा सिद्रको व्यापार भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुन्छ । फुटबल खेल हेर्ने बाहानामा आफन्त भेटघाट गर्ने, मिठा मिठा नेपाली खानको परिकार खाने, गाउने, बजाउने, नाच्ने गर्छ । गाउँ घरमा लोपोन्मुख भएको मौलिक लोकभाका सुनिमाया, यानीमाया र झ्याउरे गीतहरु सुन्न पाईन्छ । फुटबल खेलमा सुनिने हुटिङ्ग संगसंगै मादल, खैचडीको धुनले वातावरण अलौकिक बन्छ । पोखराको ढुंगे साघु, लमजुङ्गको करापुटारको जात्राको झझल्को लाग्छ, छुट्टिनै गाह्रो भैरहन्छ, आघु भेटम्ला भन्ने भावुक परिस्थिति परिवेश देख्न सकिन्छ । एक अपासमा सद्भाव र सम्मान व्यक्त गर्ने बेजोड कला र संस्कृति गोर्खा कपमा छताछुल्ल हुन्छ । कार्यक्रममा प्रस्तुत् गर्ने नेपाली नाच, ब्रिगेड गोर्खाजको खुकुरी नाच, ब्रिगेड व्याण्डको डिस्प्ले परासुट जम्पले कार्यक्रमलाई थप आर्कषण र रौनकता दिन्छ ।
गोर्खा कपको कार्यक्रम जति भव्य र विशाल हुन्छ त्यतिक्कै पुरस्कारको लागि वितरण गरिने कप त्यतिकै आर्कषक र सुन्दर पनि छ । ग्रिसको तत्कालिन राजा कन्सटेन्तान द्धितियको तर्फबाट यो सौजन्य प्राप्त भएको हो (सुवासिं गुरुङ) । यो विशुद्ध चाँदीबाट बनेको छ । अरु कपहरु भन्दा यो पृथक र महत्वपूर्ण मानिन्छ । गोर्खा कप आयोजना हुने समारोहमा युकेको एफ ए कप ल्याएर डिस्प्ले गरिन्छ , यस्ले गोर्खा कपको ज्ञान र गरिमा अझै बढेको फुटबलका पंडितहरुको भनाई रहेको छ । बेलायतको राष्ट्रिय टिमको कुशल खेलाडी लेड्ली बे्रन्टन किंग, फुटबल अप्रेशन डिभिजन एफ ए गु्रुप वेम्ली नेस्नल लिग सिस्टमको प्रमुख लरेन्सले आतिथ्य ग्रहण गरिसकेको छ । यस्ले युकेको मूलधारको फुटबल संग गोर्खा कपको निकट भएको प्रष्ट हुन्छ । ह्याम्पसायर, अल्डरसट, फार्नबरोको फुटबल क्लवहरुका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति भैरहनु भविष्यमा गोर्खा कपको माध्यमबाट फुटबलमा अझ नयाँ सोच र कार्यक्रमहरु गर्न सकिने आसा गर्न सकिन्छ । फुटबलमा चासो र भविष्य खोज्नेहरुको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसलाई सुनौलो अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।
गोर्खा कपको आयोजक तमु धिं युके भए तापनि यो कार्यक्रमले बेलायतवासी नेपालीहरुको नाम र प्रतिष्ठालाई उच्च बनाएको छ । यहाँको स्थानीय गोराहरुले यस्लाई नेपालीकै कार्यक्रम भनेर बुझ्छन् । नेपालीहरुले समाजको लागि अहोरात्र खटेर काम गर्न सक्ने अद्भूत क्षमता भएको स्वंयसेवाको प्रवल भावना भएको, बीर योद्धाको सन्तान भनेर आफ्ना परिचयको दायरा अझै पराकिलो बनाएको छ । संक्षेपमा गोर्खा कपले नेपालीहरुको ईज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ, कला र संस्कृतिलाई चिनाएको छ, पिता पुर्खाको शानलाई जोगाएको छ ।
गोर्खा कपको बढ्दो उचाई र प्रभावकारिताले आयोेजकको जिम्मेवारी पनि बढ्दो छ । नेपाली खेलाडिले मात्र खेल्न पाउने परिपाटीबाट माथि उठेर यहाँको स्थानीय खेलाडिले पनि खेल्न पाउनु पर्ने, उत्कृष्ट नेपाली खेलाडीहरुलाई यहाँको राम्रा क्लवहरुमा खेल्न पाउने वातावरण मिलाउने र दक्ष जनशक्ति ल्याएर फुटबलको प्रशिक्षण दिलाउने नयाँ कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने सोंचमा तमु धिं रहेको छ । गोर्खा कपलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रत्येक दुई बर्षको लागि एकजना कार्यक्रम संयोजक तोकेको हुन्छ । जुन शुरुबाट निरन्तर चलिरहेको छ । जुन यस प्रकार रहेको छ ।
क्र.सं. बर्ष संयोजकको नाम अध्यक्षको नाम
१) २००३–०४ नविन गुरुङ मिन प्रसाद गुरुङ
२) २००५–०६ क्या. ग्यारी घले मेजर डमर घले एमबिई
३ं) २००७–०८ क्या इन्द्र गुरुङ मेजर लाल बहादुर गुरुङ
४) २००९–१० क्या. बालकृष्ण गुरुङ सुवासिं गुरुङ
५) २०११–१२ क्या. सूर्य प्रकाश गुरुङ मुछेत्र गुरुङ
६) २०१३–१४ क्या. धन बहादुर गुरुङ कमल गुरुङ
७) २०१५–१६ क्या. पिताम्बर गुरुङ रामचन्द्र गुरुङ
८) २०१७–१८ क्या. पिताम्बर गुरुङ ग्याम गुरुङ
९) २०१९–२० क्या. पिताम्बर गुरुङ नन्दजंग गुरुङ